के होला आज भरतपुरकाण्डको फैसला ? – Everest Dainik – News from Nepal
के होला आज भरतपुरकाण्डको फैसला ?
काठमाडौं, साउन २ । लामो समयदेखि कुनै न कुनै बहानामा सर्वाेच्च अदालतमा स्थगित भएर बसेको भरतपुरकाण्डको इजलास अघि सर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले आजदेखि प्रधानन्यायाधिश गोपाल पराजुली पाएको छ । प्रधानन्यायायधिश पराजुलीले पनि सर्वाेच्चमा स्थगित भएर बसेका मुद्दाहरुलाई चाँडै छिनोफानो गराउँछु भन्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ को इजलास आज अपरान्हलाई तोकेको छ । भरतपुर १९ मा स्थानीय निर्वाचनको मतपत्र च्यातिएपछि निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि असन्तुष्ट पक्षले सर्वोच्च आदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
असन्तुष्ट पक्ष अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डे र नेकपा एमालेको भरतपुर १९ को खुलातर्फबाट वडा सदस्यका उम्मेदवार गुञ्जमान विश्वकर्माले भरतपुरमा पुनः मतदान गराउन नहुने भन्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको पेशी आज तय गरिएको हो । भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहाल र देवी ज्ञवालीबीच रोचक प्रतिष्पर्धा छ ।
ट्याग्स: bharatpur, Debi Gyawali, renu dhahal, suprim court